Home Wararka Dibada Maxaa looga hadlaya Shir Madaxeedka Midowga Afrika ee ka dhacaya Equatorial Guinea?
Maxaa looga hadlaya Shir Madaxeedka Midowga Afrika ee ka dhacaya Equatorial Guinea?
Magaalada Malabo caasimadda Equatorial Guinea waxaa maanta ka furmaya shir madaxeedka Midowga Afrika oo xooggiisa looga hadlayo labo ajendi sida uu sheegay guddiga qaabilsan qaban-qaabada shirkaan soconaya 25ka ilaa 28ka May 2022.
Arrimaha Bani aadamnimada ayaa ugu horreeya oo madaxda waxaa la dhex dhigi doonaa dood ku sabsan sidii Afrika dhexdeeda isu caawin lahayd iyo qaabka loo maareyn karo kaalmada ka timaada bannaaka Qaaradda.
Qodobka labaad waa is baddellada ku yimaada maamulada talada haya ee nidaamka Afgambiga lagu sameeyo oo sanadihii dambe ay ka dhaceen waddamo dhowr ah oo dhaca Qaaradda Afrika, madaxda ayaa hoosta ka xariiqeysa go’aanka ay ka yeelayaan madaxda aan sida dastuuriga ah u imaan.
Ka qaybgalayaa waa madaxda xubnaha ka ah Ururka Midowga Afrika, shir Guddoonka Kulanka waa Muse Faki Mohamed, ajende kale oo miiska lasoo dhigi doono ayaa ah in laga doodo waxa loogu yeero “Argagixisada” ee ka jira qaaradda.
“Laga bilaabo 25-ka illaa 28-ka May, Midowga Afrika waxa uu martigelin doonaa laba shir-madaxeed oo aan caadi ahayn oo ka dhici doona magaalada Malabo ee dalka Equatorial Guinea: Shir madaxeedka aan caadiga ahayn ee arrimaha bini’aadantinimada iyo ballan qaadyada iyo shir-madaxeedka aan caadiga ahayn ee isbeddellada aan dastuuriga ahayn ee Dowladaha Afrika” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay AU-da.
Midowga Afrika ayaa tixgelin gaar ah siin doono qodobadii kasoo baxay shirkii ka dhacay Magaalada Accra ee Ghana 15-17 Maarso 2022 ee looga hadlay wax ka qabashada falalka halista ku ah jiritaanka iyo amniga Qaaradda Afrika.
Dib u eegis ayaa lagu sameyn doonaa faafitaanka Covid-19 iyo saameyn taban ay ka dhashay Qaaradda Afrika, si madaxdu ay usoo gudbiyaan ajende mid ah iyo qorshe cad oo lagu wajahayo wax ka qabashada saameyntaas ka dhalatay Coronavirus ee aafo ku noqday Dunida.
Previous articleMareykanka: Nin hubeysan oo toogasho wadareed ku dilay 21 ruux oo Arday u badan!
Next articleXil. Mahad Salaad oo beeniyay warar Baraha Bulshada la’isla dhexmarayay sacadihii la soo dhaafay.
Xidhiidhka kubada cagta Somaliland oo soo saaray Amar la farayo in...
Xil. Mahad Salaad oo beeniyay warar Baraha Bulshada la’isla dhexmarayay sacadihii...